globalnews2020 Archives - Crown Education
Posted on: Feb 14 ,2020
Global Education Fair 2020 Free Reg: https://bit.ly/crownedu_global_2020 Feb 22 : Novotel Hotel, Pyay Room Feb 23: Mandalay Convention Center ❑ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးကို မိမိနိုင်ငံနဲ့မဝေးတဲ့စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ လေ့လာတက်ရောက်ချင်တဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် ...
Posted on: Feb 13 ,2020
Global Education Fair 2020 Free Reg: http://bit.ly/GLOBAL2020 Feb 22 : Novotel Hotel, Feb 23: Mandalay Convention Center . ❑ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အစဉ်အဆက် ဂုဏ်သတင်းကြီးတဲ့ ...
Posted on: Feb 05 ,2020
Free Registration: http://bit.ly/GLOBAL2020 Community Colleges “Heart of Tech”အဖြစ် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Californiaပြည်နယ် Silicon Valleyမှာ သင်ကြားလိုသူတွေအတွက် Global Education Fair 2020 ပွဲမှာလာရောက်မယ့် Community Collegeများ... ■ ■ ...
Free Registration: http://bit.ly/GLOBAL2020 Community Colleges “Heart of Tech”အဖြစ် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Californiaပြည်နယ် Silicon Valleyမှာ သင်ကြားလိုသူတွေအတွက် Global Education Fair 2020 ပွဲမှာလာရောက်မယ့် Community Colleges များ... ■ ...
ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆေးပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ရင် CMMUလို့ပြောစမှတ်တွင်တဲ့College of Management Mahidol University
Posted on: Feb 04 ,2020
[Global Education Fair 2020, Feb 22 : Novotel Hotel, Feb 23: Mandalay Convention Center] Free Registration: http://bit.ly/crownedu_global_2020 ■ ဆေးပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ပို့ချရာမှာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ University of Mahidolတက္ကသိုလ်အောက်က ...
ယူကေတွင်ဆေးပညာသင်ယူလိုသူကျောင်းသား၊ကျောင်းသားများအတွက်”Global Education Fair 2020″
[Global Education Fair 2020, Feb 22 : Novotel Hotel, Feb 23: Mandalay Convention Center] Free Registration: http://bit.ly/crownedu_global_2020 ■ နိုင်ငံတကာတွင် သုတေသနနှင့်ပတ်သက်၍ နာမည်ကျော်ကြားသောတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် University ...
“Heart of Tech”အဖြစ် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Californiaပြည်နယ် Silicon Valleyမှာ သင်ကြားလိုသူတွေအတွက် Global Education Fair 2020 ပွဲမှာလာရောက်မယ့် Community Collegeများ…
[Global Education Fair 2020, Feb 22 : Novotel Hotel, Feb 23: Mandalay Convention Center] . Free Registration: http://bit.ly/crownedu_global_2020 ■ ယူအက်စ်မှာ(၂)+(၂)ပရိုဂရမ်အဖြစ် လူသိများတဲ့ ကောလိပ် (၂)နှစ်၊တက္ကသိုလ် ...
ဆွစ်ဇာလန်မှာ ကျောင်းတက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်
Posted on: Feb 03 ,2020
http://bit.ly/crownedu_global_2020 [Global Education Fair 2020, Feb 22 : Novotel Hotel Feb 23: Mandalay Convention Center] . ■ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်ကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် လစာရ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဖြင့် လစာရအလုပ်သင်(၆)လပါဝင်သည့် HTMi ...